Mihalalina Ny Krizy Ara-toekarena, Nivarina Avy Amin’ny Vodka Nakany Amin’ny Labiera Sy Toaka Tsy Ara-dalàna Ireo Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2016 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, 繁體中文, русский, Français, українська, English
Lubok Rosiana momba ny fisotroan-toaka. Avy amin'ny: paukrus, Flickr. CC 2.0
Nahatonga ireo mpisotro toaka maro niala tamin'ny vodka nivadika ho labiera ny krizy ara-toekarena ao Rosia, araka ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Gazeta.ru tamin'ny herinandro lasa.
Nilaza ny manam-pahaizana avy ao amin'ny Akademian'ny Prezidansa Rosiana Misahana Ny Toekarem-pirenena sy ny Asam-panjakana (RANEPA) fa nidina 13,4 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa ny fivarotana vodka. Ary hita ho fironana iray haharitra izany: nahatratra ny fara tampony ny fivarotana ity toaka mahery ity tamin'ny 2007, ary avy eo nahitana fihenana hatrany nanomboka tamin'izay. Nidina avy any amin'ny 53 isanjaton'ny totalin'ny zava-pisotro misy alikaola rehetra lafo tamin'ny taona 2007 ka hatramin'ny taona 2009 izany ka tonga eo amin'ny 39 isanjaton'ny varotra toaka rehetra ny varotra vodka atsinjarany tamin'ny taona 2015. Raha ho an'ny labiera kosa nandritra io vanim-potoana io ihany dia niala teo amin'ny manodidina ny 31 isanjato izany ka niakatra ho 43 isanjato tamin'ny totalin'ny varotra .
Mety ho voasokajy araka ny taranaka ny fironana hoy i Alexandra Burdyak, mpikaroka lehibe ao amin'ny RANEPA sady iray amin'ireo mpanoratra ny fanadihadiana : “Voasariky ny tandrefana, eoropeana amin'ny ankapobeny, ny fitiavan'ny Rosiana teraka tamin'ny taona 1985 sy ny manaraka. Divay, labiera, ary ny toaka malefaka hafa no tian'izy ireo. “
Manana ireo petrakeviny manokana ireo Rosiana hanazavana ny fihenan'ny fivarotana vodka. Ny fanazavana feno fanantenana indrindra dia ny hoe antony mampitotongana ny fivarotana vodka dia avy amin'ny fivoaran'ny fitondran-tena amin'ny ankapobeny sy ny fomba fiainana ao Rosia :
Araka ny nosoratan’ i Ermolaeva Lyudmila tao amin'ny Facebook hoe:
Raha jereko ny manodidina ahy, ny namako, ny fianakaviako sy ny olom-pantatra, misotro kelikely kokoa avokoa ny olona rehetra. Tsy nisotro toaka mahery ny fianakaviako tato anatin'ny taompolo farany, fa divay sy labiera ihany.
Nanamarika fironana hafa tao amin'ny lahatahiry ireo mpisera Facebook hafa, anisan'izany ,ohatra, i Aleksandar Bandar, amin'ny fiovan'ny vanim-potoan'ny fisotroan-toaka :
Labiera rehefa fahavaratra , vodka rehefa ririnina – izany no lalànan'ny natiora.
Ny sasany indray mandray ny vaovao ho toy ny fitarainana hanesorana hatramin'ny fakany ny zavatra tena mampidi-doza eo amin'ny fiarahamonina Rosiana:
Manery an'i Rosia ny tsindrin'ny labiera !
Betsaka fanehoan-kevitra marani-tsaina tamin'ny vaovao nivoaka tao amin'ny Gazeta.ru. Araka ny vazivazin'i Petr Ivanov,
Tsy midika filaminana ny fisotroana kely kokoa. Manimba ny fototry ny toe-karena io fitondran-tena io. Tena ilaina ny fanambaràna toy ny tamin'ny mpitsikilo vahiny ary manala ny zo sosialin'ireo rehetra misotro vodka latsaky ny efatra tavoahangy isam-bolana isaky ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana.
Ny ankamaroany, na izany aza, nanamarika fa niresaka momba ny fisotroana toaka tsy ara-dalàna ny lahatahirin’ ny varotra atsinjarany. Vao nanomboka ny krizy ara-toekarena, nampitandrina ireo manam-pahaizana fa mety hampidi-doza, ary mety mahafaty ny fitomboan'ny fisotroan-toaka namboarina tao an-trano. Ho an'ny ankamaroany, na izany aza, somary azo antoka sady nentin-drazana malaza any an-tanindrazana Rosiana ny fanamboarana toaka tsy ara-dalàna, ary izany no fanazavana efa nomen'ny maro ho antony mampihena ny fivarotana vodka. Mbola misotro toaka mahery foana ireo Rosiana ary nahita fomba hafa kokoa mba hahazoana azy io ry zareo. Araka ny nosoratan'i Neonova Alisa tao amin'ny Facebook,
Raha mijery ny antontanisan'ny fivarotana fitaovana fikarakarana toaka tsy ara-dalàna ianao dia mahita izany ho fironana miroborobo. Tsy mino aho fa hoe misotro kely ny olona – inoana fa misotro betsaka ry zareo. Rehefa misotro toaka tsy ara-dalàna, dia tsy misy ny faneriterena ara-bola; anao daholo izay amboarinao rehetra .
Manamafy izany ny fitombon'ny fitadiavana [fitaovana fikarakarana toaka tsy ara-dalàna ] !
Araka ny fandresen-dahatr'ilay mpamaky ny Gazeta.ru Aleksandr Kochmasov ,
Tena mampihomehy. araka ny hevitrao inona no ataon'ny olona rehefa krizy? Tsy afaka manamboatra labiera izy, noho izany mazava ho azy fa manomboka mikarakara toaka tsy ara-dalàna. Na i Moskoa aza dia efa manomboka mifikitra amin'ny toaka tsy ara-dalàna, saingy manana ny fomba fikarakarany azy manokana izy ireo .
Na inona na inona ny tena anton'ny fironana ary na dia lasa malaza kokoa noho ny vodka aza ny labiera, maro no manaiky fa tena tsy manamaivana ny eritreritr'ireo izay mitady fisotroana kely (na betsaka) any Rosia ny krizy.